EziJiko Manufacturers & Ababoneleli - China eziJiko Factory
Pendant Onyuswe Aluminium Profile
Iprofayile yeAluminiyam efakwe ngaphakathi
Udonga / Isilingi / Uyilo loMgangatho weProfayili yeAluminiyam
Umphezulu Onyuswe Aluminium Profile
Ifowuni: + 90-543-8828188 （WhatsApp）
Imithetho engamashumi amabini yokukhanyisa uyilo d ...
1. Kukhanyiso loyilo, ukukhanya okungeyonyani kubalulekile njengokukhanya kwemini okanye ukukhanya kwendalo. 2. Ukukhanya kwemini kunokuncediswa ngokukhanyisa okungengokukwenziwa. Izibane ezingezizo ezokufakelwa azinakongeza kuphela ukungabikho kwemini, ...
Malunga nomqhubi we-LED
Intshayelelo kwii-LED zomqhubi we-LED zizinto ezinobuzaza beempawu zeemiconductor ezineempawu ezinobushushu ezimbi. Ke ngoko, kufuneka izinziswe kwaye ikhuselwe ngexesha lenkqubo yokwenza isicelo, e ...
Abantu baluqondile ulwazi olusisiseko lokuba izinto ze-semiconductor zinokuvelisa ukukhanya kwiminyaka engama-50 eyadlulayo. Ngo-1962, uNick Holonyak Jr. weGeneral Electric Company wenza isicelo sokuqala sokukhanya ...
Izibane eziKhanyayo ze-Strip ze-Galore
Kule minyaka imbalwa idlulileyo, itekhnoloji ye-LED ikhule ngezinga elimangalisayo. Ukukhanya kwe-LED yanamhlanje kusebenza ngakumbi kwaye kujongeka ngokwendalo kunanini na ngaphambili, kwaye amaxabiso ezikhanyiso ayehla kwikota nganye ...
Ukunikezelwa kwamandla okuqhelekileyo kwe-LED
Zininzi iintlobo zonikezelo lwamandla e-LED. Umgangatho kunye nexabiso lezixhobo ezahlukeneyo zamandla ziyahluka kakhulu. Le yenye yezinto ezibalulekileyo ezichaphazela umgangatho wemveliso kunye nexabiso. Ukunikezelwa kwamandla e-LED ngokubanzi kunokuba ...
Umahluko ezintathu phakathi LED udonga iqhoshana ...
Zombini ii-washer zodonga lwe-LED kunye nezibane ezilukhuni ze-LED zizibane zemigca, ezibizwa ngokuba zizibane ezihambelana nomzi mveliso. Nangona kunjalo, ii-washer zodonga lwe-LED zihlala zisetyenziselwa ukukhanya kwangaphandle, kunye ne-strip ye-LED ...
Malunga neziqwengana ze-LED
Ukukhetha i-Reflector ye-LED (2)
Imiqobo yokusebenzisa ukubonakalisa nangona kukho izibonelelo ezininzi esiza kuxoxa ngazo kamva, kukho iziphene ezimbalwa zokusebenzisa ukubonakalisa kwikhaya lakho okanye kwiOfisi yakho. Umzekelo, unxibelelwano phakathi ...
Ukukhetha i-Reflector ye-LED (1)
Lixesha elihle lokuba siphile kwaye siphile kweli hlabathi lanamhlanje njengoko sisikelelwe ngetekhnoloji ye-LED kwaye ifikelele kumbane waseKhaya nowe-Ofisi ngohlobo lwe-All-Powerful LED Reflectors. Kodwa, befo ...
Izibane ze-LED zekhaya (2)
Isiseko Kuyimfuneko ukugcina engqondweni ukuba isiseko sezibane ze-LED kunye nezibane ze-Incandescent azisoloko zilingana. Ngesi sizathu, qinisekisa ukuba ucima iibhalbhu zesiseko esilinganayo xa uthenga izibane ze-LED. Ngelixa ...
Izibane ze-LED zekhaya (1)
Nangona i-LED ibikhona kangangexesha elithile, kude kube kutshanje apho iye yamkelwa njengowona mthombo uphambili wezibane zasekhaya. Ngelixa iibhalbhu ze-incandescent bezikwimigangatho yeminyaka emininzi ...
Garden Light Flood, Led Tri-Ubungqina Light mdlalo , Kwabangela Floodlight 30w, Ekhokelwa sasibhalwe Light Flood, Eziphathekayo Led Light Flood, Philips 3030 Led Light Flood,